Vashanyi vePost-Brexit veku UK vanozofanira kubhadhara € 7 kuti vapinde muEU
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Vashanyi vePost-Brexit veku UK vanozofanira kubhadhara € 7 kuti vapinde muEU
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Vashanyi vePost-Brexit veku UK izvozvi vanofanirwa kubhadhara € 7 kuti vapinde muEU
European Travel and Information and Authorization Scheme (ETIAS) parizvino inobvumira vagari venyika makumi matanhatu neimwe dzisiri dzeEU kuti vapinde munzvimbo yeSchengen nepre-mvumo.
Mutauriri weEuropean Commission akazivisa nhasi kuti kutanga gore rinouya, vashanyi vese kubva kuUnited Kingdom vachafanira kubhadhara € 7 ($ 7.92) mubhadharo wevisa kupinda munyika dzeSchengen EU.
Bazi guru re European Union zvakasimbisa nhasi kuti vafambi vekuBritain vachabhadhariswa muripo wevisa, zvinoenderana nechirongwa chiripo chebloc chenyika dzisiri dzeEU uye vachafanonyoresa ruzivo rwavo vasati vabvumidzwa kupinda muEU.
The European Travel and Information and Authorization Scheme (ETIAS) parizvino inobvumira vagari venyika makumi matanhatu neimwe dzisiri dzeEU kuti vapinde munzvimbo yeSchengen vaine pre-mvumo. Panzvimbo pekuda vhiza, chirongwa ichi chinobhadharisa mutero, unobvumidza varidzi kugara mukati, uye kufamba-famba, Schengen-yakasaina EU nyika kwemazuva anosvika makumi mapfumbamwe.
Kubva mukupera kwa2022, sechikamu chehurongwa hwepost-Brexit, iyo UK ichawedzerwa ETIAS, inofukidza nyika dzese dzenharaunda yeSchengen pamwe nenhamba dzisiri dzeSchengen 'micro-states' dzakadai seVatican City.
The ETIAS chirongwa chakatanga kuburitswa ne EU muna 2016, sechikamu chekuedza kusimbisa kuchengetedzwa nekubvumira vakuru vekubvakacha kuti vatevere vashanyi kuburikidza nebloc, asi vasingade kumanikidza chirongwa chevisa chinoshanda kana uchifamba pakati penyika dziri nhengo.
Pachakaunzwa, Mutungamiriri weEuropean Commission Jean-Claude Juncker akarumbidza chirongwa ichi sekuvandudza manejimendi. EU miganhu, zvichibatsira kudzikira hutsotsi nehugandanga, uye kusimbisa mutemo webloc's visa liberalization policy.